Kalfadhiga afaraad ee baarlamanka Soomaaliya oo maanta xirmaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kalfadhiga afaraad ee baarlamanka Soomaaliya oo maanta xirmaya
Mareeg.com: Kala fadhigii 4-aad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta in lagu soo gaba gabeeyo Muqdisho, waxaana Xiritaanka Baarlamaanka la filayaa in uu ka qeyb galo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxamuud.
Wadoyinka soo gala xarunta baarlamaanka iyo madaxtooyada Soomaaliya ayaa saaka gabi ahaanba xiran, waxaana loo diiday gawaarida iyo dadka in ay maraan wadooyinka ku xeeran xarunta baarlamaanka dalka taa oo ka dhigan xaqiijinta dhanka ammaanka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa geliya fasax labo bilood ah, waxaana Baarlamaanka horyaala shaqooyin kala duwan oo ku aadan meelmarinta Shuruuc badan oo dalka u yaalo.
Bishii ugu dambeysay kulamada Baarlamanka Soomaaliya ma’aheyn kuwa si toos ah ushaqeeya, maadaama wixii ka dambeeyay markii lasoo weeraray baarlamaanka 24-05-2014 ay dareemeen Baarlamaanka cabsi badan oo ammaankooda ku aadan.